Akhri: Guuleed oo difaac ka helaya odayaal kasoo jeeda beesha uu ka dhashay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Guuleed oo difaac ka helaya odayaal kasoo jeeda beesha uu ka dhashay
19th January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg:com: Odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda beesha uu ka dhashay C/kariim Xuseen Guuleed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ka dalbaday in Cabdikariin Xuseen Guuleed lagu soo daro xukuumadda cusub ee dib loo soo dhisa
Imaam Cabdulaahi Khaliif Cabdullaahi Rooble oo ka mid ah waxgaradkii kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in beeshood ay ku qanacsan tahay in wasiirka laga dhigo Cabdikariin Xuseen Guuleed, islamarkaana ay u arkeen shaqsiga beel ahaan matalaya.
“Dad cod leh ayaan nahay, dad diidi kara ayaan nahay haddii uu xun yahay, ninkaas annaga ayuu inuu fadhiyaa, marka aad bartilmaameed ka dhiganeysaan maxaa idiinka galay, ma idinka sheerkiina ayuu ku fadhiyaa, kuwa dambi leh ayaa dowladda ka buuxa” ayuu yiri Imaam Cabdulaahi Khaliif Cabdullaahi.
Dhanka kale Odayaashaan ayaa sheegay in marnaba aanay qaadan doonin wasiir qabyo ah oo aan la kala qaadin wasaaradda arimaha gudaha iyo amniga Qaranka, islamarkaana xilligaan la’isla xisaabtami doono waa sida ay hadalka u dhigeene.
“Waxaanaan raalli ka aheyn wasiir qabyo ah, Waaiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka waa inuu ahaadaaWaaiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka, Annagu qabiil weyn ayaa nahay, waa inaan helnaa qeybta aan ku leenahay qaranka, waana xisaabtameynaa, wasiir qabyo ahna marabno” ayauu sidoo kale yiri Imaam Cabdulaahi Khaliif.
Ugaas Saciid Ugaas Maxamed Ugaas Faarax oo ka mid ah mas’uuliyiintii kulankaasi ka hadlay ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dib u heshiisiin ka gashay wasiir si gaar ah loo diido.
“Hebel ma rabo, Soomaaliya dib u heshiisiin ayay ka gashay, waxaana rabnaa haddaan nahay Habargidir in C/kariim Xuseen Guuleed lagu daro xukuumadda cusub” ayuu yiri gaas Saciid Ugaas Maxamed.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa horay isaga casilay wasiirka amniga xukuumadii uu hogaaminayay Cabdiweli Sheekh Axmed, waxaana wasiiradii uu dib ula laabtay Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ka ahaa Wasiirka u magacaaban arimaha gudaha.
Xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ceebta koowaad ee xukuumaddii dhawaan la kala diray ka dhigay C/kariim Xuseen Guuleed oo horay isu casilay, kadib markii Alshabaab weerareen xarrumo mihiim ah oo ay leedaha dowladda Soomaaliya, sida madaxtooyada iyo baarlamaanka.
R/wasaare Cumar oo la kulmay safiirka Isutaga Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya